musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Taliban anoda Turkey kumhanya Kabul Airport
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Taliban anoda Turkey kumhanya nhandare yeKabul
Mutungamiri weTurkey, Erdogan, akati kudzikama kunofanirwa kudzorerwa kuKabul asati aita sarudzo panhandare yendege, achiwedzera kuti paive nenjodzi yekuwana "kuyamwa" kune chimwe chinhu chinganetse kutsanangura kupiwa kusava nechokwadi kwakatenderedza chinangwa chingaitwe.
Turkey inosarudza pamusoro pechikumbiro cheTaliban chekubatsira kumhanya nhandare yeKabul.
Mutungamiri weTurkey Recep Tayyip Erdogan anoti hurukuro neTaliban dziri kuenderera mberi.
Hurukuro idzi dzakaitirwa panzvimbo yemasoja kuKabul airport uko kwave nemuzinda weTurkey.
Turkey yaita hurukuro dzayo dzekutanga nemaTaliban maererano nerubatsiro mukumhanyisa guta guru rekunhandare nhasi panhandare yemauto panhandare yendege yeKabul panomirirwa mamishinari eTurkey kwenguva pfupi.
Mutungamiri weTurkey Recep Tayyip Erdogan
Sekureva kweMutungamiriri weTurkey Recep Tayyip Erdogan, Ankara yanga ichiri kuongorora kupa kwaTaliban kubatsira mukushanda. Hamid Karzai International Airport (KBL) muKabul uye dzimwe hurukuro dzinogona kudikanwa sarudzo isati yaitwa.
"Takaita hurukuro dzedu dzekutanga nemaTaliban, ayo akapedza maawa matatu nehafu," akadaro Erdogan. "Kana zvichidikanwa, tichava nemukana wekuita hurukuro dzakadai zvakare."
Turkey yakanga iine mazana emauto muAfghanistan sechikamu cheNATO basa, uye yanga ichitarisira kuchengetedzeka kwendege kwemakore matanhatu apfuura.
Achipindura kushoropodzwa mudzimba pamusoro pekubatana kweTurkey neboka remagandanga, Erdogan akati Ankara "haina" umbozha "yekumira isingazivikanwe munzvimbo isina kugadzikana.
“Iwe haugone kuziva zvavanotarisira kana zvatinotarisira pasina kutaura. Chii chinonzi diplomacy, shamwari yangu? Uku ndiko kudyidzana, ”akadaro Erdogan.
Turkey yanga ichironga kubatsira kuchengetedza uye kumhanyisa airport yeKabul, asi nemusi weChitatu yakatanga kuburitsa mauto kubva kuAfghanistan - chiratidzo chinoratidza Ankara kusiya chinangwa ichi.
Erdogan akati maTaliban ave kuda kutarisira kuchengetedzeka kunhandare yendege, uku achipa Ankara sarudzo yekumhanyisa zvinhu.
Vakati mabhomba ekuzviuraya akauraya vanhu vangangoita zana negumi, kusanganisira mauto gumi nematanhatu eUS, kunze kwenhandare panguva yekupedzisira yekubuda nechimbi-chimbi neChina chakaratidza kukosha kwekuziva ruzivo rwekuti nzvimbo yemhepo ichachengetedzwa sei.
Erdogan akati kudzikama kunofanirwa kudzorerwa kuKabul asati aita sarudzo panhandare yendege, achiwedzera kuti paive nenjodzi yekuwana "kuyamwa" kune chimwe chinhu chinganetse kutsanangura kupihwa kusava nechokwadi kwakatenderedza basa rinogona kuitika.
"Taliban akati: 'Tichava nechokwadi chekuchengeteka, iwe unoshandisa airport". Hatisati tatora danho panyaya iyi, ”akadaro Erdogan.
Ankara kusvika parizvino yakaburitsa varwi vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu uye vanhu vanopfuura chiuru nemazana mana kubva kuAfghanistan kubvira pakatorwa Taliban mwedzi uno.
Erdogan, akamboshoropodza maTaliban sezvaaipfuura nenyika achienda kuKabul, akati Turkey yanga ichida kupedzisa kubvisa vanhu pamwe nekudzinga mauto nekukurumidza.